Imbali kunye noKhula kwePark Park
Imbali kunye nophuhliso lwe-Central Park yaseNew York
I-Central Park e-New York City yayiyimpaka kawonkewonke yaseMelika yokuqala. Ukusebenzisa amandla e-domain ephawulekayo, umthetho weNew York State wanikwa umthetho wama-acre angaphezu kwama-700 ekwii-843 zamahektare. Ejikelezwe yiManhattan, eli lizwe lalinomnye wabahlali base-Afrika abaqaqambileyo baseMerika kunye nabahlwempuzekileyo belikhulu le-19. Abangama-1,600 abahlali babefuduka kwiindawo zokuhlala xa umhlaba ophakathi kwe-5 ukuya kwe-8 kunye nezitalato ezingama-59 kunye ne-106 zithathwa njengezifanelekanga ukuphuhliswa kwangasese.
Isiqithi saseManhattan apho ipaki ihlala khona iqulethwe yincinci ye-schistose kufuphi kufuphi nomhlaba. Iziganeko ezintathu ze-schistose zihlala nge-marble kunye ne-gneiss formations, ezivumela isiqithi ukuba sikwazi ukuxhasa indawo enkulu yasezidolophini yaseNew York City. E-Central Park, le geology kunye nembali yomsebenzi we-glacial yimbangela yeendawo ezinamatye kunye nomhlaba. Iindawo ezizimeleyo zedolophu zigqibile ukuba ziza kuba yindawo efanelekileyo epaki.
Ngo-1857, iKomishoni yokuqala yePark Park yasungulwa kwaye yabanjwa ukhuphiswano lokwakhela indawo entsha yoluntu. Umphathi wepaki uFrederick Law Olmsted kunye nomlingani wakhe uCalvert Vaux uzuze "iSicwangciso soGreens." Ukugcinwa kuphela kwezinto ezibonakalayo zezinto eziphilayo ezaphazamisa indawo, u-Olmsted noVaux babenelungelo lokulolongwa kweefolda ezifana neyesiNgesi.
Icandelo lokuqala leCentral Park livulelwe uluntu ngoDisemba ka-1859 kwaye ngo-1865 iPark Park yayifumana iindwendwe ezigidi ezi-7 ngonyaka.
Okwangoku, i-Olmsted ixubushe ngokubanzi kunye namagosa asezidolophini malunga nokuyila kunye neenkcukacha zokwakha. Abasebenzi babetha ixilongo elinomdongwe ogqithiseleyo kunokuba besetyenziswe e-Gettysburg, bathuthele malunga ne-3 million cubic yards yomhlaba waza batyala izihlahla ezingama-270,000 nemithi. I-reservoir eyongeziweyo yongezwa kwisayithi kwaye iimpampu ekupheleni ekumgangatho wepaki zatshintshwa ngamachibi.
Ipaki yayityelela inkoliso emininzi kodwa yayidla ngokunciphisa izibonelelo zemali.
Emva koko, malunga noxa u-Andrew Green efakwe njengomlawuli omtsha, u-Olmsted wayephoqelelwe ngaphandle kweso sikhundla sakhe sokuba ngumphathi wesigqeba. Ukukhawuleza ukwakhiwa ngokugxila ngaphantsi kwiinkcukacha, iGreen yayikwazi ukufumana indawo yokugqibela yomhlaba. Icandelo langasenyakatho-mpuma yepaki, phakathi kwezitrato ezili-106 ne-110 zinyuka kwaye zisetyenziselwa ngaphezu kwesibheno sayo esingenasigxina. Naphezu kweengxaki zohlahlo lwabiwo-mali, iPark Park yaqhubeka nokuphuhlisa.
Ngowe-1871 i-Central Park Zoo yavulwa. Ukuze ukwakhiwa ngokusemthethweni ngo-1973, ipaki yayisetyenzisiwe kakhulu ngabemi abacebileyo baseNew York ababethelela iindlela zepaki kwiinqwelo zabo. Njengoko imikhombandlela yokukhupha i-industrialization yenza abantu bajolise kwi-economic production of city, iintsapho ezincinci zengeniso zazihlala kufuphi nepaki. Ekugqibeleni, ipaki yayiqhutywe ngentando yeningi kwaye iiklasi ezincinci zivakatyeke rhoqo. I-American Century entsha yafika ngokukhawuleza, kwaye ipaki yephalamende yesizwe yayisithandwa kakhulu.
Abantwana bamenywa kunye nebala lokudlala lokuqala ngo-1926. Ngama-1940, umkomishinala weepaki uRobert Moses wayesebenzisa indawo engaphezulu kwama-20.
Iiklabhu zeBhola zaye zavunyelwa ukufikelela epakini kunye neendwendwe zavunyelwa ngotshani. Nangona kunjalo, mhlawumbi ngenxa yecandelo le-suburbanization elihlangene namava emva kweWWII, ipaki yayisesona simo esona sibi kakhulu ekupheleni kweminyaka yama-60 no-70. Kwimiba ethile le nto yayingumqondiso wokubola kweNew York kwedolophu. Isondlo sasele phantsi kwendlela, ukushiya iinkqubo zendalo zepaki ukugqithisa iinkqubo kunye nokulungiswa kwemvelo eyenziwe yikhomishini yokuqala. Iiprogram zoluntu zikhawuleza zijongene nomba.
IiRallies zenziwa ukubuyisela umdla woluntu epakini. Kwiminyaka yee-1980, njengoko umdla woluntu unyuka, i-Central Park Conservancy yangasese ikwazi ukulawula iimali zepaki kunye nokongamela. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa koluntu kuye kwasoloko kulawula ukulawulwa kwemithombo yepaki, ngokukodwa ngokuqaliswa kweendibano ezinkulu zoluntu ezinjengama-concerts e-rock e-1960.
Namhlanje, abahlali abayizigidi ezisibhozo zeSixeko saseNew York bangakwazi ukufikelela epakini yamakhonsathi, imikhosi, uqeqesho, ezemidlalo, i-chess kunye nabahloli-mali kwaye nje ukuba babalekele ubomi obuhlala kwidolophini kwisixeko esingalali.
UAdam Sowder ungumdala wesine e-Virginia Commonwealth University. Ufunda i-Urban Geography ngokugxila kwiCwangciso.
Amagareji eBhettery Ukuba Phased Out
I-Myse Mythology yiyona ndlela ikhethekileyo yonqulo
I-Chemistry ye-BHA ne-BHT Preservatives
Ibali elimangalisayo le-Only Par-4-One-One kwi-PGA Tour History
Iinqununu zamaKristu zobuGcisa
Ama-movie ama-horror ama-Australia
Imfazwe yaseMerika: i-CSS Alabama
Imbali yePekingese Inja
Iminyaka eyi-13 eyamangalisa yokwenza ama-Hit: I-History Illustration of Motown